साहस उर्जाकाे आईपीओ बजारमा आउँदै, कहिले खुल्दै छ आवेदन ? - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarसाहस उर्जाकाे आईपीओ बजारमा आउँदै, कहिले खुल्दै छ आवेदन ?
साहस उर्जाकाे आईपीओ बजारमा आउँदै, कहिले खुल्दै छ आवेदन ?
काठमाडाैँ | साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेडले साउन २९ गते, शुक्रबारदेखि साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएकाे छ । कम्पनीले पहिलाे चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेकाे हाे ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ३५ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नेछ । उक्त आईपीओ आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दाहरुका लागि हाे ।
आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १० लाख ५० हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले आईपीओमा छिटोमा भदौ ११ गते र ढिलोमा भदौ २७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उक्त साधारण सेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।
सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दाहरुले ग्लोबल आईएमई बैंक, सल्लेरी सोलुखुम्बु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लुक्ला, लक्ष्मी बैंक, मुग्ली र नेले शाखा सोलुखुम्बु, माछापुच्छ्रे बैंक, सल्लेरी, सोलुखुम्बु र प्राइम कमर्शियल बैंक, रमिते शाखा, सोलुखुम्बुबाट र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि-आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
Previous articleहिजो निष्कासन गरेको सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा पहिलो दिनमै कति आवेदन पर्यो ?
Next articleकारोबारको अन्तिम दिन जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमुल्यमा सर्किट